वंशलाल, जसले भत्काए एमालेको किल्ला, बने गाउँपालिका प्रमुख – Everest Times News
सिन्धुपाल्चोकको इन्द्रावती गाउँपालिका एमालेको किल्ला मानिन्छ । जिल्लाकै शक्तिशाली पार्टी एमालेका जिल्ला अध्यक्ष झम्क नेपालले उमेदवारी यही गाउँपालिकामा दिएका थिए । राप्रपाको उर्वर भूमि पनि यही हो । त्यसैले राप्रपाका अध्यक्ष दइन्द्र ठकुरी पनि यही भिडन्तमा थिए । यो क्षेत्रबाट माओवादीका अग्नि सापकोटाले संविधानसभाको दुइवटै चुनावमा आफ्नो जित सुनिश्चित गरे । कांग्रेसले कहिल्यै चुनाव नजितेको यस क्षेत्रमा झन्डै १२ वर्ष अमेरिका बसी फर्केका एक अधवैंशेले यही पार्टीबाट उमेदवारी दिएका थिए ।
तर, जित उनैको भयो । एमाले जिल्ला अध्यक्ष झम्क नेपाललाई २०० मतले पछि पार्दै वंशलाल तामाङले ५,३६५ मत पाए ।
अमेरिका पलायन भइसकेका एक व्यक्ति फर्केर स्थानीय सरकार प्रमुखमा चुनिनु सजिलो पक्कै होइन । तर उनको जितको पृष्ठभूमि थाहा पाउन माओवादी जनयुद्ध सुरु भएको समयतिर जानु पर्ने हुन्छ ।
माओवादी जनयुद्ध सुरु भएको समयदेखि नै सिन्धुपाल्चोक क्षेत्र नम्बर २ मा नेपाली कांग्रेसका चर्चित नेताका सूचीमा वंशलाल तामाङका नाम पनि थपियो । १६ वर्षकै उमेरमा २०३६ सालमा ऐसेलुखर्क माविमा नेपाल विद्यार्थी संघको इकाई सभापति भएका उनी २०५४ सालको स्थानीय निकायको निर्वाचनबाट त्यतिबेलाको इलाका नम्बर ६ बाट जिल्ला सदस्यमा निर्वाचित भए ।
त्यहीबाट राजनीतिक उचाइ“ थप्दै आएका तामाङ २०५७ सालमा कांग्रेस जिल्ला सचिवमा चुनिए । २०४२ सालमा सत्याग्रह आन्दोलनताका जेल परेका उनले जिल्ला प्रशासनको ढिलासुस्ती र घुसखोरीविरुद्ध अभियान चालेका थिए । राजधानी नजिक भएपनि सिन्धुपाल्चोक विकट पहाडी क्षेत्र भएको र त्यहा“का अधिकांश जनतालाई प्रशासनले दुःख दिने भएकोले धेरैजसो मानिसहरु समस्याका पोका लिएर तामाङकहा“ धाउ“थे ।
त्यतिबेला विकासका विषयभन्दा पनि प्रशासनमा गर्नुपर्ने कामहरु र कर्मचारीको हेपाहा प्रवृत्तिबाट सर्वसाधारण त्रसित बनेका थिए । उनीकहा“ पुगेका समस्या सजिलै पन्छाइ दिएपछि उनी जनतामाझ लोकप्रिय बन्दै गए र २०५६ सालको मध्यवधि निर्वाचनमा धेरैले क्षेत्र नम्बर २ मा कांग्रेसबाट उनै तामाङलाई टिकट दिनुपर्ने माग गरे । तर, पार्टीले उनलाई टिकट दिएन ।
यद्यपि उनको लोकप्रियता भने बढ्दो नै थियो । उनी पार्टीमा नवौं महाधिवेशनमा महाधिवेशन प्रतिनिधि चुनिए । राजनीतिस“गै समाजसेवामा अगाडि देखिएपछि उनलाई तत्कालीन नेकपा माओवादीले अपहरणको प्रयास ग¥यो । उक्त कार्य असफल भएपछि तामाङलाई माओवादीले ज्यान मार्ने धम्की दियो । ‘मलाई २०५९ पुस २६ गते राति माओवादीले ज्यान मार्ने धम्की दियो, त्यही दिनबाट म गाउ“ बस्न सकिन“, जिल्ला छाड्नुप¥यो,’ तामाङ भन्छन्, ‘काठमाडौंमा भूमिगत भएर बसें ।’
काठमाडौंमा पनि माओवादीको निगरानी बढेकाले उनी अमेरिका पलायन भए । उनले देश छाडेको केही वर्षमै देशमा युद्धविराम भयो र क्षेत्र नम्बर २ मा दुइपटक संविधानसभाको चुनाव भयो । दुबैपटक माओवादीका अग्नि सापकोटा संसद चुनिए ।
त्यही क्षेत्रमा पर्ने इन्द्रावती गाउ“पालिकामा माओवादीको विरासत तोड्दै, एमाले जिल्ला अध्यक्ष झम्क नेपाललाई हराउ“दै झन्डै १२ वर्ष अमेरिका बसेर फर्केका तामाङ प्रमुखमा चुनिएका छन् । यसअघि राप्रपा, एमाले र माओवादीले जित हासिल गर्दै आएको ठाउ“मा तामाङको आगमन र कांग्रेसको जितले वेग्लै किसिमको उत्साह छाएको छ इन्द्रावतीमा ।
जिल्लाका शक्तिशाली पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष दइन्द्र ठकुरी, एमाले अध्यक्ष झम्क नेपालले उम्मेदवारी दिएको ठाउ“, माओवादीको राम्रो भोटर भएको ठाउ“ र कांग्रेसले कहिल्यै चुनाव नजित्ने ठाउ“मा उमेदवारी दिने आ“ट कसरी आयो ? भनेर हामीले सोध्दा तामाङले भने, ‘मुख्यतयः जनताको माग थियो । म अमेरिका हुदा“ पनि मलाई विभिन्न माध्यममार्फत गाउ“लेहरुले गाउ“ आउन अनुरोध गरिरहनुभयो । त्यसैले म सरकारले निर्वाचन घोषणा गर्नसाथ अमेरिकाबाट फर्के । गाउ“ गए“ । हरेक गाउ“ पुग्दा सबैले मलाई नेतृत्वमा देख्न चाहेको बुझें । म आए हुन्थ्यो भन्ने उहा“हरुको कुराले मलाई उमेदवारी दिने आ“ट आयो । त्यसपछि पुनः अमेरिका फर्के, ग्रिनकार्ड त्यागें । अनि निर्वाचनमा होमिए ।’
इन्द्रावतीको प्रमुखमा चुनिएपछि तामाङले खुसी हुदै भने, ‘०५६ देखि मलाई जनताले पर्खि बसेका रहेछन्, अखिर सत्यको जित भएको छ, मैले नराम्रो गरी गाउ“ छाडेको भए मलाई जनताले मत नै दिदैनथे ।’
जनस्तरमा व्यक्तिगत प्रभाव जित्नुको मुख्य आधार भएको उनको दाबी छ । अखिर त्यस्तो प्रभावकारी काम के गरेका छन् त ? तामाङ भन्छन्, ‘अमेरिका पलायन भएपनि विभिन्न माध्यमबाट गाउ“का विकासनिर्माणमा जोडिएँ । यही सिलसिलामा न्युयोर्कमा सन् २०१० मा सिन्धु वेलफेयर सोसाइटी स्थापना भयो । त्यही संस्थामार्फत गाउ“का अनाथ, द्वन्द्वपीडितलाई नेपालीकै सहयोगमा आवासीय सुविधासहित पढाउने व्यवस्था गरें । हाल १३ जना यस्ता बालबालिका काठमाडौंको कपनस्थित माउन्ट कैलास स्कुलमा विभिन्न कक्षामा अध्ययनरत छन् ।’
उनका अनुसार यस क्षेत्रका विद्यालयहरुमा उनले विभिन्न परियोजनाहरु ल्याए । स्थानीय स्रोतलाइ व्यवस्थापन गर्दै खानेपानीको व्यवस्थाका लागि परयोजना ल्याउने काम पनि उनले गरेका रहेछन् । भूकम्पको समयमा अमेरिकामा रहेर पनि उनले विभिन्न स्थानमा पहल गरी यस क्षेत्रमा राहत पु¥याउने काम पनि गरे । उनले आफ्नो क्षेत्रमा मात्र काम गरेनन् । क्षेत्र नम्बर १ मा पनि यस्ता उदाहरणीय काममा अगाडि छन् । जुरे पहिरोले ध्वस्त भएको वनसा“घु माविको आधुनिक भवन उनकै नेतृत्वमा निर्माण सम्पन्न भएको छ । त्यही क्षेत्रका विद्यालयहरुमा पनि उनले सहयोग पु¥याइदिएका छन् ।
कुनै लाभको पदमा नहुदा“समेत गाउ“को विकासमा लागेका उनबाट जनताले धेरै आशा गरेका छन् । यस गाउ“लाई देशकै नमुना गाउ“पालिका बनाउने र विश्वका विभिन्न नगरहरुस“ग मितेरी सम्बन्ध गा“सेर प्रविधिमैत्री गाउ“ बनाउने उनको योजना छ ।
यस गाउ“पालिकाका सर्वसाधारण भने पानी र सडकको समस्याले दिनहु“ पीडित छन् । भूकम्पले गाउ“पालिकाका सम्पूर्ण जनता प्रभावित छन् । यस्तो अवस्थामा चुनावी घोषणपत्रमा यस्ता विषयलाई पनि समेटेका उनी भन्छन्, ‘घरघरमा धारा पु¥याउने घोषणा पार्टीको हो, यो अवश्य पुरा हुन्छ, इन्द्रावतीमा चक्रपथ हाम्रो सपना हो, हामी पा“च वर्षभित्रमा यो सपना पुरा गर्छौ । तर, हाम्रो पहिलो प्राथमिकता पुनर्निमाण नै हुनेछ ।’